खाली पेट पानी पिउनुका ९ आश्चर्यजनक फाइदा – PanchKhal Online
Home/स्वास्थ्य /जिबनशैली/खाली पेट पानी पिउनुका ९ आश्चर्यजनक फाइदा
खाली पेट पानी पिउनुका ९ आश्चर्यजनक फाइदा
काठमाडौं– पानी मानव जीवनका लागि नभइ नहुने पेय पदार्थ हो । पानीको मात्रा बढाउनुभयो भने शरीरमा लाग्ने अधिकांश रोग निर्मुल हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी पिउनुको अर्थ धेरै छ। यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो। खाली पेटमा पानी पिउँदा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो। प्रायः जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी पिउँछन् ।
खाली पेट पानी पिउनुका फाइदा
पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन्। यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ। खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ। यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुन्छ।
खाली पेट प्रशस्त पानी खादा पेटका विकार शौचमार्फत जाने र पेट सफा हुन्छ। यसले पाचन प्रणालीलाई पनि सहयोग गर्छ। तपाईलाई एका बिहानै शौच आउदैन भने कम्तिमा दुई गिलास मन तातो पानी खाली पेट खाँदा खुलेर शौच आउछ।
नियमित खाना खानु महत्वपूर्ण हुन्छ। तर भोक लागेन भने के गर्ने ? खाली पेट पानी पिउदा तपाईको भोग जाग्छ। बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा दुई गिलास पानी पिउनुहोस तपाईलाई भोक लागिरहन्छ।
मानिसलाई बारम्बार टाउको दुख्नुको मुख्य कारण प्रर्याप्त पानी नपिउनु पनि एक हो। डिहाइड्रेसनको मुख्य लक्षण नै टाउको दुख्नु हो। तसर्थ बिहान उठ्नेवित्तिकै पानी खानु भयो भने यो समस्याबाट मुक्क्ति मिल्छ। टाउको दुख्नबाट बचाउनको अतिरिक्त यसले श्वासको दुर्गन्ध र अन्य व्याक्टेरियाको संक्रमणबाट जोगाउछ।
खाली पेट पानी पिउदा कोलोन सफा गरिदिन्छ। एक गिलास पानी खाली पेट खाँदा कोलोनमा जम्मा भएको लेदो र विकार सफा गरिदिन्छ। कोलोन सफा भएमा शरिरलाई आवश्यक पोषक तत्व शोषण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तपाईको कोलोन सफा भएमा समग्रमा सम्पूर्ण शरिर नै स्वस्थ हुन्छ।
खाली पेट प्रशस्त पानी खादा अनुहारको चमक बढाउछ । शरिरमा जति बढी विकार र उत्तेजित तत्व हुन्छ त्यति नै तपाईको अनुहारको छाला नराम्रो बनाउँछ। तर प्रशस्त पानी खाँदा विकार हट्ने भएकोले अनुहारको सुन्दरतामा निखार आउँछ।
समग्र स्वास्थ्यको लागि पानी नभई नहुने तत्व हो। शरिरमा तरल पर्दाथको सन्तुलनका लागि पनि पानी नभई हुँदैन। दिनहुँ खाली पेटमा पानी खाँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्छ। तपाईको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएमा तपाईलाई कुनै पनि प्रकारका रोग लाग्दैन।
नेपालका अस्पतालहरु रोग उत्पादन गर्ने थलो पनि हुन् !
छालालाई स्वस्थ राख्न ५ खानेकुरालाई व्यवस्थित गर्नुहोस्
निगुरो खाने गर्नु भएको छ ? यस्तो फाइदा पुग्छ
दम, माइग्रेनदेखि क्यान्सरसम्म निको पार्ने रिट्ठाको प्रयोग कसरी गर्ने ?